Ambatovy: manohana ny tantsaha sy ny orinasa madinika | NewsMada
Ambatovy: manohana ny tantsaha sy ny orinasa madinika
Par Taratra sur 01/03/2021
Letisia 5,8 taonina ny novidian’ny orinasa Newrest, misahana ny toeram-pisakafoana ao Ambatovy, tamin’ireo tantsaha mpikambana ao amin’ny kaoperativa Fanoitra ao Toamasina II, ny volana desambra 2020. Fiaraha-miasa eo amin’ny orinasa sy ireo tantsaha ao amin’ny kaominina Toamasina II sy ny Fanandrahana izany, izay mbola hivelatra amina karazam-bokatra hafa ny filàna ao Ambatovy amin’ity taona ity.
Tetikasa natao hanampiana ireo tantsaha mpamokatra voankazo sy legioma eny amin’ny faritra manodidina ny toerana fanangonana ny ambin’akora avy nakana nikela sy kobalta, nanomboka ny taona 2019, nipoiran’izao fiaraha-miasa izao. Tanjona ny hanampiana ireo tantsaha mpikambana ao amin’ny koperativa Fanoitra hampitombo ny vokatra, hifantohan’izy ireo amin’ny fambolena, sy hahita lalam-barotra hampitombo ny fidiram-bola. Araka ny takin’ny orinasa, notolorana fitoerana vita amin’ny plastika 100 mahazaka 20 kg isanisany ny tokantrano 35 mpikambana ao amin’ny koperativa Fanoitra, ny volana febroary teo. Izany dia ho fanampiana azy ireo hahamora ny fitateram-bokatra.
Manohana ireo orinasa madinika
Manampy ireo orinasa madinika (PME) ao an-toerana koa ny orinasa Ambatovy. Aron-tava azo sasana sy averina ampiasaina miisa 43 000 novidiana tamin’ny orinasa madinika mpanjaitra Atelier Vonjy ao Toamasina, nanomboka ny volana marsa 2020 ka hatramin’izao. Tanjona amin’izao fiaraha-miasa amin’ny Atelier Vonjy izao ny hanohanana ireo orinasa madinika eto Madagasikara amin’ny fividianana entana vokariny. Fandraisana anjaran’ny orinasa amin’ny fanatsarana ny fahasalaman’ireo olona sahirana, indrindra ny vehivavy, amin’ny alalan’ny fampidirana azy ireo eo amin’ny sehatry ny asa maharitra. Marihina fa isan’ireo andraikitra sahanin’ny fandaharanasa ALBI (Ambatovy Local Business Initiative) izay natsangan’Ambatovy hanohanana ireo orinasa eto an-toerana izao tetikasa izao.